Soo dejisan Swamp Attack 2.0 – Vessoft
Soo dejisan Swamp Attack
Qoyan weerarkii – ciyaarta fiidyawga oo ah in la ilaaliyo gurigii ciyaaryahan ka dhanka xayawaanka waalan. Qoyan weerarkii waxaa loo qaybiyaa dhawr dhacdooyin dhowr ah oo weyn of heerka iyo baaxada sii kordhaysa oo ah maraya in koorsada ee saakay. Kulankaan ayaa waxa uu leeyahay xayawaanka rabid in ay weeraraan guriga iyadoo kooxaha iyo leedahay xawaare ka duwan dhaqdhaqaaqa, dhibcood caafimaadka iyo weerar gaar ah oo u gaar ah. Qoyan Weerar ku jira dukaan Arsenal badan oo hub ah, waxyaabaha qarxa iyo caqabadaha daafac in la heli karo kadib markii uu maray dhowr ah oo qaar ka mid ah heerarka. Sidoo kale qoyan weerarkii ugu lacag ciyaarta taasoo ciyaaryahan helo diyaar u yihiin burburinta xoolaha waalan oo laga helay gunooyinka.
Xayawaanka badan oo waalan
Arsenal A badan oo hub iyo caqabadaha daafac
Helitaanka heerarka bonus
Kartida ay u soo iibsadaan lacagta qadaadiicda oo dahab ah
Swamp Attack Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... RAR 5.30.34